Fifandonana Tao Mahabad, Iràna, Taorian’ny Fahafatesana Nahatonga Resabe Nanjo Mpiasa Vavy Amin’ny Hotely · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Mey 2015 5:18 GMT
Araka ny Vohikalam-baovao Rudaw, miahiahy ireo mponina ao an-toerana fa lehiben'ny tafika Iraniàna ilay tena fototry ny fahafatesan'i Khosrawani, izay lazaina fa miara-miasa amin'ny tompon'ny hotely.
Lahatsoratra izay hafa ao amin'ny Rudaw milaza fa nisamborin’ ny manampahefana ny lehilahy iray mifandray amin'io loza io, izay namboraka fa niaraka taminy talohan'ny nitsambikinany teny amin'ny varavarankely.
Ny filazàny, izay manao an'i Khosrawani ho mpivarotena, dia afaka hita ao amin'ny Youtube miaraka amin'ny dikateny Arabo ery ambany. Milaza ihany koa ireo vaovaon'ny governemanta fa ireo tenifototra mikasika io raharaha io dia avy amin'ny faritra mpifaninana, Arabia Saodita, milaza fa anisan'ny fanoherana tohanan'ny Saodiana io korontana io.
Abullah Muhtadi, Sekretera Jereralin'ny antoko Kiorda Komala, namerina ny fiampangan'ireo mpanao hetsika, ary nilaza ny Rudaw fa mpitam-bola i Khosrawani tao amin'io hotely io ary tsy nahalala ilay lehilahy akory:
Olona maro no nosamborina ary maherin'ny olona miisa 25 no naratra tamin'ilay fifandonana, iray kosa naratra mafy. Mibitsika #RarinyHoAn'iFarinaz ireo mpanao hetsi-panoherana tezitra:
Nifamory mba hiantso ny hijerena ny nahafatesan'i Farinaz ihany koa ireo Kiorda any amin'ny faritra hafa maneran-tany, sahala an'i Berlin sy i Londona. Nanainga ireo vahoaka ny ben'ny tanànan'i Mahabad, Jaafar Katani, mba ho hijanona ho tony, ary hiandry ireo valin'ny fanadihadian'ny governemanta hanamarinana ireo antony ao ambadiky ny fahafatesan'ilay vehivavy. Nilaza ihany koa ny fianakavian'i Khosrawani fa hiandry ireo valiny avy any amin'ny manampahefana izy ireo.